Manandriana ary izao eto ambositra izao izahay, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian ny sabotsy 6 aprily teo. Toromarika mazava no napetraka dia ny famerenana ao anatin’ny fotoana fohy ny filaminana sy ny fandriampahalemana, izay mifanaraka amin’ny velirano nataon’ny filohan’ny repoblika. Nisy ny fiaraha-midinika natao tamin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ireo toerana voalaza ireo, ka ao ireo nandraisana fanapahan-kevitra avy hatrany, ary misy kosa ireo mbola hodinihina. Voakasik’izany ny fanatevenana ny isan’ireo mpitandro ny filaminana. Mialoha izay dia hisy ny fandaminana ny fiaraha-miasa eo amin’ireo samy mpitandro ny filaminana mba hamaritana izay toerana tokony hisy azy ireo. Hisy ihany koa ny fanadihadiana atao momba ny tambajotran’olon-dratsy na iza izy ireo na iza, ary ny fandinihana ny toerana tokony hametrahana ny toby manokana. Nanome toromarika ireo tompon’andraiki-panjakana samihafa. Tsy hiandry ela fa hotanterahina avy hatrany ny toromarika amin’ny fahafahana ananantsika ka hahitana vokatsoa ao anatin’ny fohy ezaka, hoy ny fifanomezan-toky.